अनमोल केसी बलिउडकी श्रीदेबी कि छोरी जान्हवी कपूरसंग फिल्मम इन्ट्री गर्दै ! – MeroOnline Khabar
अनमोल केसी बलिउडकी श्रीदेबी कि छोरी जान्हवी कपूरसंग फिल्मम इन्ट्री गर्दै !
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा निकै चर्चा कमाएका अभिनेता अनमोल केसीलाई बलिउडबाट अफर आएको छ । चर्चित निर्देशक पेमा धोन्डुप ले निर्देशन गर्ने फिल्ममा अभिनेता अनमोल केसीलाई अफर आएको हो ।
यस फिल्ममा अपोजिटको लागी श्रीदेबी कि छोरी जान्हवी कपूर रहने समाचारमा जनाइएको छ । चैत १ गते प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ का निर्देशक समेत रहेका पेमा धोन्डुप ले निर्देशन गर्ने यस फिल्ममा अभिनेता गुशलन ग्रोवरको पनि अभिनय गर्ने बताइएको छ ।
फिल्मको स्क्रिप्टमा काम भइरहेको फिल्मको लागत १० करोड आसपास हुने बुझिएको छ । यसो त यस अघि पनि अनमोलले एक बलिउड फिल्म साइन गरेको खबर आएको थियो । जान्हवी कपूर बलिउडको चर्चित फिल्मी परिवारकी छोरी हुन् ।
बेलायतजस्ता देशमा सुप, तरकारी, चिया, जुस, औषधि आदि विभिन्न रूपमा सिस्नुको पात तथा जराको प्रयोग गर्दै आइएको छ । यसका साथै सिस्नोको प्रयोगबाट अन्य फाइदा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ।
← यी हुन् सरकारी जागिर छोडेर कलाकारिता अङ्गालेर सफल बन्ने नेपाली कलाकारहरू हेर्नुहोस्
श्वेता खड्का बोल्न सक्दैन चल्यो रुवाबसी ! श्वेता नानी हाम्रो भगवान हुन् →
आफूलाई ‘बेवकुफ’ भन्दै जिस्काएपछि विवाह गरेको तीन मिनेटमै डिभोर्स !
एउटा चुनाब जसले दुई सुपरस्टार साथीलाई जीवनभर दुश्मन बनायो
राष्ट्रवादी काँग्रेसले विवेक ओबरायलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग